निशा खनाल (अर्याल)
नेपालदृष्टि । इजरायलको अनेसास च्याप्टरको अधिवेशन थियो ! नेतृत्व परिवर्तन र रचना वाचन गर्ने कार्यक्रम समेत भएकोले सर्जक / साहित्यानुरागीहरूको भेला बाक्लो थियो ।
अधिवेशनले मलाई निर्वाचित गर्यो । म अनेसास इजरायल च्याप्टर अध्यक्ष भएँ ! रचना वाचन गर्ने क्रममा म अघि सरेँ । कविता ‘आमा’ शीर्षकमा थियो । निकै मार्मिक कविता वाचन भयो भनी मलाई वधाई दिनेहरूको ओइरो लाग्यो ।
यसै क्रममा खादा ओढाउँदै एक युवतीले भनी, “वधाई छ दिदी ! हजुरको नाम त मैले उहिल्यै सुनेकी थिएँ । भेट भने अहिले भयो !”
“धन्यवाद ! धन्यवाद !! आभारी छु !!!” मैले बधाई दिनेलाई भन्ने शब्द यिनै थिए, उसलाई भने विशेष भनेँ, “म त पहिलेदेखि नै अनेसास च्याप्टरमा आबद्ध छु ।”
कार्यक्रम समाप्त भएर सबै लाखापाखा लागे । त्यस युवतीले भने मलाई छाड्दै छाडिनँ ।
भन्दै गई, “बाबाले तपार्इँ इजरायलमा हुनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । अनलाइनहरूमा सर्च गर्दा तपार्इँको फोटो र लेख, कथा, कविताहरू पढ्न पाउँथेँ । बाबासँग फोनमा कुरा हुँदा हरेक पटक सोध्नुहुन्थ्यो, “निशालाई भेट्यौ त ?”
“अनि के जवाफ फर्काउँथ्यौँ त !” मैले उत्साहित हुँदै भनेकी थिएँ, “म त जताततै छु । जहाँ पुगेर खोजे पनि मलाई भेट्न सकिन्छ ।”
“सधैँ भेट्छु बाबा ! प्रत्येक्ष भेट्न त साइत जुर्नुपर्छ । साहित्य संसारमा भेट्छु । अन्य अखबारी जगत्मा भेट्छु ।” उसले पनि मेरै मनसायलाई जोड दिँदै भनेकी थिई, “तपाईंका रचना पढ्दा पढ्दा म फ्यान भइसकेको पत्तै भएन । बाबा त तपाईंको सहृदयी आनीबानीको मात्र फ्यान हुनुहुन्थ्यो ।”
यो युवती को हो र उसको बाबा को हो ? कसका बारेमा कुरा गर्दै छे यो केटी ! उसका नजरमा म उसलाई नजिकबाट चिन्दछु भन्ने रहेछ । यद्यपि म पूरापूरी अनविज्ञ थिएँ । मनमा जे कुरा खेले पनि मुख खोल्ने काम भने गरिनँ ।
“यहाँ अर्थात् इजरायलमा कामको टर्चरले मेन्टल समस्या भयो । डाक्टरको चेकजाँचपछि मेडिसिन खाँदै जाँदा केही राम्रो भएको छ, दिदी ! काम गर्न नसक्दा भिसा काटिएपछि इमिग्रेसनले धुरूक्कै पारेर दुई पट्क थुनिए । एउटा वकिलको सहारामा तीस हजार सेकेल बुझाएर नेपाल फिर्ता पठाउनबाट बचेँ । उसैले शरणार्थीको कागजात बनाई दियो र म इजरायलमै रहन पाएकी छु । हाल यसो साना दुईचार जना वच्चाको मेतापेलेत भएर सुसारेको काम गर्दै छु ।”
उसको कुरा सुनिरहेँ । कुराको छेउटुप्पो नबुझे पनि कुरा मार्मिक लाग्यो । एक नारीको पीडा सम्झेर सुनिरहेँ, ऊ भन्दै गई– “बाबाका धेरै आशाहरू त्यत्तिकै मरे । रोग र चिन्ताले ग्रस्त भएको बाबाको विगत थियो । वर्तमान पनि त्यस्तै छ, बलिन्द्र धारा आँसु बग्न रोकिएको छैन । म एम. ए. पढ्दै गर्दा मालपोतको सुव्वा हरिसँग बिहे गराइदिनुभयो । उसको स्वभाव भने जाँड–रक्सी र जुवा–तासमा रातरातभरि रम्ने रहेछ । धेरै जसो बाहिरै बस्ने, घर आउँदै नआउने गर्नाले म दिक्क थिएँ । केही सोधे रिसाउने गर्थ्यो । आफू पनि रिसाए, हात छोडूँलाजस्तो गर्थ्यो । अफिसबाट आइहाले पैसाको विटो लिएर आउथ्यो । र, वेलुका म खान आउँदिन भनेर निस्कन्थ्यो । गाउँलेहरूले सुनाउथे– तेरो लोग्ने होटेलहरूमा युवतीहरूसँग रात बिताउँछ । एक दिन मैले नै रङ्गेहात फेला पारेँ ।”
ऊ अगाडि बताउँदै गई– एकदिन घुस लिँदै गर्दा पक्राउ पर्यो । जागिरबाट सस्पेन भयो । मुद्दा मावलामा भएको सबै सम्पति सकायो । रात दिनको कचकच र गनगनले म वाक्कदिक्क भएकी थिएँ । पछि रातोदिन पिट्न शुरु गर्यो । सहन नसकेपछि काखकी दुई वर्षकी छोरी लिएर माइत आएर बस्न थालेँ । आमाको पनि स्वास्थ्य राम्रो थिएन । प्रेसर र सुगरको विरामी । मैले दु:ख पाउने भएँ भनेर बाबाले एउटा मेनपावरमा पाँचलाख दिनु भएको रहेछ । पैसा बुझाएको झण्डै एक वर्षपछि मेरो भिसा आयो । र, इजरायलमा प्रवेश गर्न पाएँ ।
उसले लामो सास तानी । र, आफ्नो कथालाई निरन्तरता दिइरही– दुई वर्षकी नाबालक छोरी रोगी आमाको काखमा छोडकी थिएँ । उहाँ पनि पनि म आएको दुई वर्ष नबित्दै मुटुको व्यथाले बित्नुभयो । त्यसबेला मलाई कामबाट निकालेकोले आमाको मुख हेर्न जान पाइनँ ! आँसु चुहाएर आमाको क्रियाकर्म गरेँ । र, छोरी र बाबाको याद गरेर झोक्राइरहेँ ।
मेरा तीन दाजुमध्ये जेठो केदार काठमाडौँमा अख्तियार आयोगको अधिकृत हुनुभयो । बावालाई दमले आक्रमण गर्यो । काममा जान सक्नुभएन । दाजुबाट घरका लागि कुनै सपोर्ट भएन । उहाँ भाउजूको सोचतिर सर्नुभयो । उहाँका साथीहरू सभ्रान्त परिवारका थिए । बुवाआमाले दिएको पैसामा थपथाप गरेर लोकन्थलीमा घर–घडेरीको व्यवस्था गरे । दाजुको मार्गनिर्देश र भाउजूको मेहनत र प्रयासपछि निजामती सुव्वामा निकालीन् ।
माइला दाजु उमेश चाहिँ हेर्दा भद्र देखिन्थे । धेरै नबोल्ने, पढ्नमा निकै तेजिलो थिए । स्कलरसिप पाएर पढ्न अमेरिका गए । त्यस बेला पनि आमाबुबाले अब दु:खको दिन सकिए भनेर छोरालाई सगुन दही खुवाएर हात हल्लाउदै बिदा गर्नुभयो । दाइ उमेशले पिएचडी पछि सिकागोको एउटा इम्भरसिटीमा प्रोफेसर भएछन् । आफ्नै सहपाठी जर्मन राष्ट्रियता बोकेकीसँग प्रेम विवाह गरे रे । फोनमा कुरा हुँदा यस्तै भन्थे ।
उनलाई पनि विवाहपछि अमेरिकाको संघर्षमय जीवनको ठुलो छालले कता बगायो कुन्नि ? थाहा छैन । घर परिवार, देश, समाज, इष्टमित्र, आफन्तहरू सबैले माल्दाइसा्ँ... जे आशा राखेका थिए त्यसको कुनै मतलव भएन उनलाई । उनी अहिलेसम्म मौन छन् !
युवतीले व्यथा सुनाएर लामो श्वास तानी फनक्क मुन्टो बटारी र आँखाको आँसु पुछी ।
म एकोहोरिएँछु । प्रश्नविहीन भएँछु । र, एक्कासि सोध्न पुगेँछु, “हैन, बहिनी पीडाको पोखरीमा हेलायौ । आक्रोशको ज्वाला मनमा दङ्कायौ । न आफ्नो नाम भन्यौ । न आफ्नो बाबाको नाम सुनायौ । तिम्रो बाबाले कसरी चिन्नुभयो मलाई ? म विदेश पसेकी चेलीलाई !”
प्रश्नमाथि प्रश्नको थुप्रो लगाउँदा ऊ छक्क परी । गलत मान्छेसँग पो पारिवारिक गोप्य कुरा खोलेँछु भनेर ऊ पछुताई । अनुहार खुम्च्याई र छुट्टिन खोजी ।
मैले नै आग्रह गरिरहेँ । ऊ टक्क अडिई ।
“हजुर निशा अर्याल भनेको हैन !” अविश्वासी नजर मतिर फ्याक्दै भनी, “राजविराज, सप्तरीमा जन्मेकी सप्तरिया चेली भनेको हैन !”
मैले मुन्टो हल्लाएर सकारात्मक जवाफ फर्काएँ ।
“तपाईं मदन शर्मालाई चिन्नुहुन्न र ?” मैले फेरि स्वीकारोक्ति जनाएपछि भनी, “म उहाँकै छोरी हुँ,ं रुपा शर्मा ।”
अपरान्ह चार बजेको थियो । तुुम्लिङ्गटार विमानस्थलमा विदेशी–स्वदेशी पर्वतारोहीहरू र सहयोगीले खचाखच भरिएको थियो । सिजनको समय भएर होला हिमाल चढ्ने भारी धमाधम भरिन लागेका थिए ।
त्यसमध्ये एउटा अन्दाजी छ फिट अग्लो करिब ४०/४५ वर्षको मान्छे उभिएको देखेँ । तीन मीटर मात्रैको दुरीमा रहेको उसको शरीरबाट आएको दुर्गन्धले म नाक खुम्च्याइरहेकी थिएँ । ठुलो टाउको, ठूल्ंठूला आँखा, चौडा निधार, ङिच्च हाँस्दा पहेँला घिनलाग्दा दाँतमा मात्र मेरो नजर वारम्वार परिरह्यो ।
ऊ आफ्नो उचाइको आधा अग्लो ढाकरमा धमाधम सामान भर्दै थियो । उसको खुशी र पीडा मिश्रित अनुहारले उसको शरीरलाई जाँगरिलो बनाउँदै थियो । म आनन्दले टुलुटुलु हेरेर मात्र वस्न सकिनँ । मेरो आत्माले उसँग केही जिज्ञासा राख्न खोज्यो । म उसको छेउमा ठिङ्ग उभिएँ र जिज्ञासु नजर लगाउँदै आफूतिर आकर्षित गर्ने प्रयत्न गरेँ । तर, मेरो प्रयासले उसभित्र सञ्चारिक तरङ्ग ल्याउन सकेन । मेरो मनोभावनालाई उसले बुझ्दै बुझेन ।
विरक्त अनुहारको त्यस मूर्तिलाई आकर्षण गर्ने निरन्तर मेरो प्रयास जारी नै रह्यो । अन्तमा उसलाई सम्बोधन गर्दै मैले भनेथेेँ, “दाइ ! भारी त निकै ठुलो छ नि ? सहयोग गरूँ कि ?”
उसले धोक्रे आवाजमा भन्यो, “यति त बोक्नै पर्यो । सानो भारीले मेरो गुजारा नै चल्दैन, बुयिनी !”
“घर चाहिँ कहाँ हो नि दाइ ?”
“देउरालीबाट चार घण्टा पर । बाहुनको छोरो हुँ ।”
“शुभ नाम चाहिँ के हो दाइको ?”
“मदन हो, डोलेश्वर पनि भन्छन् बोलाउँदा ।”
“के–कति परिवार छन् त ? खेतीपाती ?”
“हामी छ जनाको परिवार, तीन छोरा, एक छोरी अनि हामी श्रीमान् र श्रीमती.। लगभग दश/बाह्र मुरी अन्न फल्ने खेती छ । खेतीको अन्न वालीले गुजारा हुँदैन । खान त जसोतसो पुग्छ तर छोराछोरीलाई आधापेट खाएर मजस्तै भरिया हुन नपरोस् भनेर हिमाल चढ्ने कुइरेको भारी बोकेको हुँ ।”
मैले चाहेभन्दा बढता नै जवाफ दिएथ्यो उसले । मैले पनि प्रश्न गर्न जारी राख्तै सोधेथेँ, “छोराछोरीहरू कतिमा पढ्छन्, के गर्छन् त दाइ ? गाउँमै कि शहरमा ?”
“एक घण्टा टाढा स्कुल छ तर पढाइ राम्रो छैन । त्यसैले सबै सदरमुकाममा पढ्छन् ।”
”कसरी धान्नुहुन्छ त ?”
“पढाइको लागि खर्च गर्न लोभ गर्दिनँ म । उनीहरूको शिक्षाका लागि भारी बोकिरहेछु !”
“दशैँको मूखमा हिमालतिर लाग्नुभयो त ? कति दिनमा फर्कनुहुन्छ ?”
“लाग्छ चार महिना जति । हिउँमा हिँड्न सजिलो कहाँ छ र ?”
“एक खेपमा कति आम्दानी हुन्छ त दाइ ?”
“चालिसदेखि पचास हजार । यसो पाँच छ महिनाको गुजारा चल्छ । फेरि फागुनमा चार महिनाको बोक्यो भने वर्ष दिनको गुजारा चल्छ ।”
“दाइ ! त्यसो त दशैं लेंकमै वित्ने रहेछ नि ?”
“हो, बुयिनी ! लगभग १५ वर्ष भयो हिमालमै दशैँ मानेको । यिनै भारी बोक्ने भरियाहरू र शरदारहरू, सरकारी हाकिम, शेर्पा र पर्वते सबै मिली दशैँ मनाउँछौँ । सरकारी अफिसरले नै सबैलाई टीका लगाई दिन्छन् । त्यही रमाइलोमा विदेशीहरू पनि रमाउँदै हामीसँग सहभागी हुन्छन् । श्रीमती र छोराछोरीको सम्झनाले भने त्यसबेला आँखाले भेल बगाउँछ ।”
दुई महिनामा खेतीवारी लगाइसकेपछि मदनको काम निरन्तर यसरी नै चलिरहेको छ । गाउँलेहरू मदनको यस कामले प्रसन्न मात्र छैनन् । परिश्रम र सन्तानप्रतिको योगदान देख्दा अचम्भित हुन्छन् ।
मदन सम्झन्छन्– अरवको भूमिमा चर्को आगोको राम्पमा सेकिँदा व्यतित पलहरू कष्टकर हुन्छन् । दीर्घरोगी बन्नू र अशक्तको चाकडीमा अपमान र पीडाहरू भोग्नू कत्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । जर्मन, वेलायत तथा विदेशका जुनसुकै ठाउँमा भोग्ने यातनाको असह्य वेदना, रगत बग्दै गरेको खुट्टा, मेसिनमा पेलिँदै गर्दाको रगतले पोतिएका युवाहरू सम्झिन्छन् उनी । अपाँङ्ग भएर व्हिल चेयरमा घर फर्किन लाचार युवायुवतीहरू, बाकसमा हरेक महिना आउने लासको थुप्रो, परिवारको चिच्याहट आदि वेदनाका यस्ता अनगन्ती यातना र पीडाभन्दा त आफ्नै देशमा भारी बोक्ने भरियाको जीवन इज्जतदार ठान्छन् उनी ।
मदनले कुरा थपे, “अर्थोपार्जन गर्न सजिलो कहाँ छ र ? बरू मलाई त आफ्नै देशको भरिया हुँन्दा आनन्द महसुस हुन्छ । झन हिमाली डाँडाकाँडाको दर्शन हुने र खेतीपाती पनि हराभरा रहने ।”
मदनको कुरा चाख मान्दै सुनेर उनको वारेमा जिज्ञासाले मैले प्रश्न तेर्साइरहेँ ।
उनले खिसिक्क हाँस्दै सोधे, “बुइनी, चाहिँ कुन ठाउँँबाट आएकी र के गछ्र्यौ ? नाम के हो ?”
मैले उनको जिज्ञासा मेटाउँदै भनेथेँ, “मलाई निशा भन्छन्, म इजरायलबाट केही दिनको छुट्टीमा आएकी हुँ, म तराई सप्तरीकी हुँ ।”
यस्ता कुरा गरेको आज मदनसँग पच्चिस वर्ष बितेछ । जेठो छोरा नेपालमै अधिकृत, माइलो अमेरिका फिजिक्समा पिएचडी गरी अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा प्रोफेसर, कान्छो अरवको मलेसियामा दस नंग्रा खियाउँदै र छोरी इजरायलमा मेतापेलेत (किएर गिभर) ।
तिनै मदनका आधा सपना साकार देखिन्थे त आधा निराकार ।
सम्झिन्छु म, अरूका मलेसिया र इजरायल हानिएका छोराछोरीको कष्टदायक जीवन । मदनका अमेरिका गएर प्रोफेसर भएको छोरो अनि नेपालमा एक विशिष्ट पदमा रहेको हाकिम ।
अहिले आएर थाहा पाएँ– सधैँको भरिया मदन आफैँ कष्टकर जीवन बिताइरहेको छ । गाउँले कुरा गर्छन्– कठै, मदनले सन्तानको लागि आफ्नो सर्वस्व सकायो । आमाले कति दुख गरेर हुर्काइन् । राजधानीमा राखेर सबैलाई पढाए । दुई ठुला पोष्टमा भए । कान्छो भने कुलतमा लागेर साउदी हानियो । छोरीले दु:ख पाई । सानी नातिनीको भविष्य सम्झेर इजरायल लागि ।
अमेरिका भएको छोरोले कुइरिनीसँग विवाह गर्यो । ऊ गएदेखि भेट्न घर फर्केन । जेठो छोरा निजामतिमा ठुलो हाकिम भयो । सबै आफ्नै पत्नीका कुरा सुन्न व्यस्त भए, घरपरिवारलाई हेर्ने मौकै पाएनन् ।
आमाको पनि सुगर, प्रेसर र दमको रोगले थलिँदा स्याहार्ने कोही भएन । निधन भयो । तेह्र दिन जेठो छोरोबुहारी क्रियामा बसे, माहिलो वार्षिकीको काममा आएको थियो । कान्छो साउदीको जेलमा परेर बसेको छ । छोरी इजरायलमा निकै दु:ख पाएर शरणार्थी भईबसेकीले चाहेर पनि आउन सकिन ।
अहिलेसम्म आफ्नी छोरीको पढाइ खर्च र मदनको बुढेसकालको भरथेग रुपाले नै गरिरहेकी छे । तीन दाजुहरूको वेवास्थालार्ई ऊ एक्लैले थप्पड हानिरहेकी
छ, समाज यसै भन्दै छ ।